Bhaibheri ‘Rakafuridzirwa naMwari’ Here?
NYAYA IRI PAKAVHA | BHAIBHERI RINOBVA KUNA MWARI HERE?
BHAIBHERI rinobva kuna Mwari here kana kuti zvinhu zvirimo dzingoriwo pfungwa dzevanhu?
Vanhu vakawanda vari kutaura zvakasiyana-siyana nezvenyaya iyi, kunyange vaya vanozviti vaKristu. Semuenzaniso, imwe ongororo yakaitwa kuUnited States muna 2014 nekambani yeGallup, yakaratidza kuti vakawanda vaiti “Bhaibheri rinofanira kunge richibva kuna Mwari.” Asi munhu 1 pa5 aiti Bhaibheri ibhuku “rengano, rinongotaura nyaya dzakaitika kare uye zvinhu zvirimo dzingoriwo pfungwa dzevanhu.” Pana 2 Timoti 3:16 panoti: “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.” Asi zvinorevei kuti Bhaibheri ‘rakafuridzirwa naMwari’?
ZVINOREVEI KUTI BHAIBHERI ‘RAKAFURIDZIRWA’?
Bhaibheri rine mabhuku madiki 66 akanyorwa nevanhu vanenge 40, uye zvakatora makore anenge 1 600 richinyorwa. Saka kana Bhaibheri rakanyorwa nevanhu, sei zvichinzi ‘rakafuridzirwa naMwari’? Mashoko ekuti ‘rakafuridzirwa naMwari’ anoreva kuti zvirimo zvakabva kuna Mwari. Bhaibheri rinoti: ‘Vanhu vakataura zvichibva kuna Mwari sezvavaitungamirirwa nemweya mutsvene.’ (2 Petro 1:21) Saka Mwari akashandisa simba rake remweya mutsvene kuudza vanhu ava zvavaifanira kunyora. Zvakafanana namaneja anoudza mushandi wake zvinhu zvaanofanira kunyora mutsamba. Muridzi wetsamba ndimaneja, kwete mushandi ari kuinyora.
Dzimwe nguva Mwari aituma ngirozi kuti dziudze vanhu ava zvavaifanira kunyora. Vamwe vaiita zvekuoneswa uye vamwe vairatidzwa kuhope. Kunyange zvazvo Mwari aimbovabvumira kushandisa mashoko avanoda pakunyora, pamwe pacho aitoita zvekuvaudza mashoko chaiwo avaifanira kunyora. Pasinei nekuti mashoko avainyora vaiaudzwa sei, zvese zvavainyora zvaibva kuna Mwari, kwete mumusoro mavo.
Tinozviziva sei kuti Mwari ndiye akafuridzira vanhu vakanyora Bhaibheri? Verenga nyaya inotevera unzwe zvikonzero 3 zvinoratidza pachena kuti Bhaibheri rinobva kuna Mwari.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku MUKAI! Nhamba 3 2017 | Bhaibheri Rinobva Kuna Mwari Here?
Pane Angaziva Kuti Ndiani Akanyora Bhaibheri Here?
Vanhu Vakachenjera Ndivo Vakanyora Bhaibheri Here?